ရိုးရာဂျပန်အဝတ်အစားရိုးရာဂျပန်အဝတ်အစား | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | 09/07/2021 09:30 | ယဉျကြေးမှု, ဂျပန်
ဂျပန်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယအိမ်ဖြစ်သည်။ ငါအဲဒီမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာရောက်နေတယ်။ ကပ်ရောဂါတစ်ခုပြီးဆုံးသွားဖို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ ငါဒီတိုင်းပြည်, ၎င်း၏လူ, ၎င်း၏ gastronomy နှင့်၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုကိုချစ်၏။ ဂျပန်သည်ဖီးနစ်ဖြစ်သည်။ သံသယရှိစရာမလိုပါ။ ယနေ့ဤအံ့ဖွယ်အမှုများစွာ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မီးမောင်းထိုးပြလိမ့်မည် ရိုးရာဂျပန်စားဆင်ယင်.
ဒီနေရာမှာလူတွေဟာသူတို့လိုချင်တဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေ၊ လမ်းတွေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာတာကိုမင်းသတိပြုမိလိမ့်မယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ခေတ်သစ်အဟောင်းနှင့်အတူတကွနေထိုင်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဘုံပို့စကတ်သည်ကျောရိုးရှိအလုပ်အမှုဆောင်၏ဘေးတွင်ကီမိုနိုတွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတွေ့ရန်ဖြစ်သည်။
ငါအထက်တွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့ ဂျပန်လိုဝတ်စားဆင်ယင်ပုံဘယ်သူမှသူတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ သင်ဟာ anime ဇာတ်ကောင်လိုဝတ်စားဆင်ယင်ထားတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူကဘာလဲဆိုတာသိတဲ့သူတစ်ယောက်၊ ဝတ်ဆင်ထားသည့်စီးပွားရေးသမား၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားသို့မဟုတ်လုပ်ကြံ။ သုတ်လိမ်းထားသောလူငယ်များကဲ့သို့ဝတ်စားဆင်ယင်ထားသောလူကြီးတစ် ဦး ကိုတွေ့နိုင်သည်။
ဖက်ရှင်တွေရှိတယ်၊ သင်တန်းတွေရှိတယ်၊ သူတို့နောက်လိုက်တဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကကွာခြားချက်က ဘယ်သူမှအခြားလုပ်တာကိုမကြည့်ဘူး နွေရာသီမှာအဝါရောင်သုံးရင်ငါတို့အဝါရောင် ၀ တ်နေတယ်၊ ​​ခြားနားချက်တချို့ရှိတယ်။ ကြည့်ကြည့်ဝေဖန်မဟုတျကွောငျးကြီးလှ၏။ မင်းမှာရင်သားကြီးတယ်မဟုတ်လား၊ ဂျင်းဘောင်းဘီကဂျနီဖာလိုပက်ဇ်လိုမင်းနဲ့မတူဘူးလား။ ဂရုမစိုက်ဘူး?
အကယ်၍ သင်သည်ဂျပန်သို့သွားရန်စီစဉ်လျှင်၎င်းသည်၎င်း၏လမ်းများမှတဆင့်လျှောက်လှမ်းခြင်းနှင့် ၄ င်း၏လူများကိုလေ့လာခြင်းသည်ကြီးမားသောယဉ်ကျေးမှုအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်သိသင့်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ခေတ်သစ်၊ ရှားပါး။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အစဉ်အလာနှင့်အတူ၊ ယူကတ်၊ ကီမိုနို၊
ဂျပန်ရိုးရာအ ၀ တ်အစားသည်ကီမိုနိုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကီမိုနိုများကိုပြုလုပ်သည် ပိုးထည်, သူတို့ကပခုံးကနေခြေသို့သွားသောရှည်လျားသောအင်္ကျီလက်ရှိသည်, သို့မဟုတ်နီးပါးသူတို့ကိုကျယ်ပြန့်ခါးပတ်နှင့်အတူကိုင်ထားကြသည် obiနှင့်နေ့စဉ်ဘ ၀ ၌သူတို့သည်အထူးအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်ရိုးရာပွဲတော်များအတွက်လာရောက်လေ့ရှိကြသည်။
ကီမိုနို အမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုများကိုကန့်သတ်သည် ၎င်းသည်အ ၀ တ်အထည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစဉ်အလာဂျပန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္,, လက်ထောက်, အဖော်, ခဲဖွယ်စားလှည့်လမ်းလျှောက်၏အခန်းကဏ္ hand နှင့်အတူလက်ချင်းတွဲ။ ဆောင်းရာသီကီမိုနိုနှင့်နွေရာသီကီမိုနိုရှိသည်အဖြစ်လူသိများပေါ့ပါးလျော့နည်းအလွှာ yukatas ။ manga နှင့် anime တော်တော်များများ၌တွေ့ရသည့်အတိုင်းကလေးများသို့မဟုတ်လူငယ်များသည်နွေရာသီပွဲတော်များအတွက် yukatas ကိုဝတ်ဆင်ကြရသည်။
အဆိုပါကီမိုနိုinတ္နှင့်ပုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွှာနှင့်ဖြစ်ပါတယ် အလွှာအရေအတွက်သည်လူတစ် ဦး ၏စီးပွားရေးအဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည် သို့မဟုတ်၎င်း၏လူမှုရေးအရေးပါမှု။ အမျိုးသမီးကီမိုနိုများသည်အမှန်တကယ်တွင်အမျိုးသားများထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးအသေးစိတ်များရှိသည်။ အလွှာများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမဖုံးအုပ်နိုင်သည့်အတွက်၎င်းသည်တကယ့်ကိုလှပသောအရောင်များကိုကစားနိုင်စေသည်။
ကီမိုနိုထုတ်လုပ်သည့်ထည်မှာအရှည်ရှည်သည် ဇော်ဂီရောင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၁.၇ မီတာအရှည်ရှိပြီးအကျယ် ၃၄ စင်တီမီတာခန့်ရှိသည်။ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုဒီကနေဖြတ် ဇော်ဂီရောင်တစ် ဦး သည်ရှေ့နှင့်ကောင်တာရှေ့ကိုလုပ်ရန်နှင့်နောက်တစ်ခုမှာသက်ဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်ဖြစ်သည်။ ကျောဘက်၏အလယ်တွင်ဒေါင်လိုက်ချုပ်ရိုးကိုပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကဏ္ sections နှစ်ခုလုံးနှင့်တွေ့ဆုံပြီးအနာဂတ်အရှည်များကိုခေါက်။ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုအင်္ကျီလက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။
အင်္ကျီလက်မှသည်အထည်အလိပ်အထိကွဲပြားခြားနားသည်။ ၂၀ ရာစုအစတွင်ကီမိုနိုများကိုတီထွင်ခဲ့သည် မိန်းကလေးများချွတ်ယွင်းသောပိုးမှရရှိသောပိုးထည်တစ်ထည်။ နောက်ပိုင်း, အထည်အလိပ်စက်ယန္တရား၏နိဒါန်းနှင့်အတူ, ဒီအနိမ့်တန်းယက်အမျိုးအစားအသုံးပြုခြင်းစုံလင်ခြင်းနှင့်ထို့ကြောင့်ပိုပြီးတောက်ပ, ထူ, အကြမ်းခံခြင်းနှင့်အတော်လေးစျေးနှုန်းချိုသာထည်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒီအ ၀ တ်အစားကိုအရောင်ဆိုးဆေးများဖြင့်တီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းစနစ်များဖြင့်ဆေးကြောခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဂျပန်အမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့၏ပုံမှန်ကီမိုနိုများကိုပြုလုပ်ရန် meisen ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
ကီမိုနိုနောက်ထပ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည် Tsukesage, Homongi ကီမိုနိုထက်အနည်းငယ်ပေါ့ပေါ့။ ၎င်းသည်ခါးအောက်ပိုင်းရှိareaရိယာအနည်းငယ်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်ပိုမိုရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းများရှိသည်။
ရိုးရာဝတ်စားဆင်ယင်ပုံတစ်မျိုးရှိသည် geishas ကျိုတို SUsohiki။ ဤရွေ့ကားမိန်းမပျိုများသည်ကခုန်ခြင်းသို့မဟုတ်ပုံမှန်အနုပညာအချို့ပြုလုပ်သောအခါယင်းနှင့်အတူ ၀ တ်ဆင်သည်။ ဒီအဝတ်အစားရဲ့အရောင်နဲ့ဒီဇိုင်းကနှစ်ရဲ့ရာသီနဲ့ geisha တက်ရောက်မယ့်အဖြစ်အပျက်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။
၎င်းသည်ပုံမှန်ကီမိုနိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်ရှည်လျားသောဝတ်စားဆင်ယင်မှုဖြစ်ပြီး၊ စကတ်ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်ဆွဲတင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ susohiki သည် ၂ မီတာကျော်လွန်နိုင်သည် တစ်ခါတစ်ရံသူလည်း Hikizuru ဟုခေါ်သည်။ Maikowho သီချင်းများ၊ ကခုန်စဉ် (သို့မဟုတ်ဂျပန်ရိုးရာကြိုးသုံးချည်မျှင်ရိုးရာဂျပန် shamisen) တီးမှုတ်သောအခါတွင်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။ သူမရဲ့အလှဆုံးသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည် Kanzashi ဆိုလိုသည်မှာဆံပင်ပုံဖော်ဆိုင် ၎င်းသည်ယွန်းထည်၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ လိပ်ခွံ၊ ပိုးသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ကီမိုနိုစတိုင်အမျိုးမျိုးရှိသည်ကိုသင်သတိပြုမိပေမည်၊ ထို့ကြောင့်ဤနေရာတွင်လူကြိုက်အများဆုံးအချို့၏အမည်များဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီအသက် ၂၀ ပြည့်သည့်အခါအမျိုးသမီးငယ်များသည်ရှည်သောလက်ရှည်နှင့်ဝတ်ဆင်ထားသည် ဟွမ်ဂျီ, Semi- တရားဝင်, inတ္, အဆွေခင်ပွန်း၏မင်္ဂလာဆောင်များတွင်သုံးစွဲဖို့ Komon ဒါဟာပိုပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့သူတို့မှာဒီဇိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ယောက်ျားရဲ့ကီမိုနိုဟာ Hakama နဲ့ haori ဂျာကင်အင်္ကျီပေါင်းစပ်ထားတဲ့အမြဲရိုးရှင်းတဲ့၊
ပြီးနောက် yukatas? ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောကီမိုနို, ဝါဂွမ်းသို့မဟုတ်ဒြပ်ကြိုးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူတို့ကိုမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများက ၀ တ်ဆင်သည်။ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူပြီးစျေးလည်းချိုသာသောကြောင့်လူကြိုက်များသည်။ ယူကတ်စ်များသည်အစဉ်အလာဆိုးဆေးဖြင့်ဆိုးဆေးများရှိခဲ့သော်လည်းယနေ့တွင်အရောင်နှင့်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အကယ်၍ သင် ryokan သို့မဟုတ် onsen တစ်ခုသို့သင်သွားပါကaည့်သည်ဖြစ်ချိန်တွင်သင့်အခန်း၌အသုံးပြုရန်တစ်ခုရှိသည်။
နောက်ထပ်ရိုးရာဂျပန်အဝတ်အစားသည် hakama။ အမျိုးသားများအတွက်ဖြစ်ပြီးကီမိုနိုအပေါ်တွင် ၀ တ်ထားသောအဝတ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာခါးမှာချည်ထားခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒူးထောက်။ အများအားဖြင့်ဤအထည်သည်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်များ၊ အစင်းများပါ ၀ င်သည်။ အပြာများတွင်မော်ဒယ်များလည်းရှိသည်။ sumo နပန်းသမားများတွင် Hakama ကိုသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ အဲဒါလိုမျိုးပဲ ဂျပန်လူ၏အထိမ်းအမှတ်.
နောက်ထပ်ရိုးရာအထည်ချုပ်သည် ပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုသုံးပါ ပွဲတော်များမှာယောက်ျားအထူးသဖြင့်ကခုန်သောသူတို့။ အဆိုပါ happi တံတောင်ဆစ်အင်္ကျီလက်နှင့်အတူရှပ်အင်္ကျီဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ပွင့်လင်းသောမျက်နှာစာရှိပြီးခါးပတ်ကြိုးများနှင့်ချိတ်ထားသည်။ ပျော်ရွှင်မှုသင်္ကေတများနှင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းများကိုပွဲတော်များတွင်အသုံးပြုသည်၊ အခြားအဖြစ်အပျက်များတွင်ခါးပတ်ပတ်လည်၌ခါးပတ်နှင့်ချည် ထား၍ ရိုးရှင်းသည်။ အချို့သောဒီဇိုင်းများသည်လည်ပင်းတွင်ရှိပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်လက်များကိုပခုံးပေါ်သို့တက်သွားတတ်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ် ဂျင်ဘီ အိမ်၌ဖြစ်စေ၊ နွေရာသီပွဲတော်များတွင်ဖြစ်စေလည်ပတ်ရသည့်ကျပန်း၊ ညဝတ်အင်္ကျီနှင့်ဆင်တူသည်။ ၄ င်းတို့ကိုအမျိုးသားများနှင့်ကလေးများ ၀ တ်ဆင်သည်၊
ဒီရိုးရာဂျပန်အဝတ်အစားကိုအဖြစ်လူသိများသစ်သားဖိနပ်ထည့်သွင်းထားသည် ဂေး, Tabi ခြေအိတ်နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲဝတ်ဆင်, zori, သားရေသို့မဟုတ်ထည်ဖိနပ်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများပါ ၀ တ်ဆင်ထားသည့် haori ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့် kanzahi, အဖြီး အရမ်းလှတယ်၊ ငါတို့ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဦး ခေါင်းတွေမှာတွေ့ရတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာရှခရီးသွားခြင်း » ဂျပန် » ဂျပန်ရိုးရာဝတ်စုံ
Punta Cana ရှိအကောင်းဆုံးဟိုတယ်များ